Fahoriana ateraky ny valanaretina :: Vehivavy matin’ny “Covid-19” teo am-piterahana • AoRaha
Tsy mitsitsy fa mihatra aman’aina tanteraka ny valanaretina. Vehivavy nitondra vohoka, 20 taona, no nindaosin’ny fahafatesana teo am-piterahana noho ny fihomboan’ny tsimok’aretina “Covid-19” tao aminy, andro vitsy lasa izay. Soa fa avotra ny zanany, taorian’ny fandidiana nataon’ny mpitsabo tamin’ny toeram-pitsaboana iray ivelan’ny renivohitra.
Izy no Malagasy fahafito namoy ny ainy tamin’ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara, araka ny tatitra ofisialy avy eny amin’ny Ivon-toeram-pibaikoana momba ny Covid-19 (Cco) teny Ivato, omaly. “Isan’ireo marary mafy sivy notaterina teto, omaly (Ndrl: afak’omaly), izy. Nisy fahasarotana teo amin’ ny fiterahany. Efa semposempotra, niaraka tamin’ny fanaviana, ity renim-pianakaviana ity, araka ny fanazavan’ireo mpitsabo nandray an-tanana azy. Tsy maintsy natao faran’ izay haingana ny fandidiana nanavotana ny zaza tao ankibony”, hoy ny profesora Vololontiana Hanta Marie Danielle, mpitondra tenin’ny Cco, omaly.
Fantatra fa nampiasana ôksizena io renim-pianakaviana rehefa niha sahirana ny taovam-pisefoany. Nametrahana fantsona mihitsy teo amin’ny foto-tendany nahafahana nampiditra ny ôksizena tao anatiny. Araka ny fanazavan’ny mpitsabo iray dia tsy ahiana ho nifindran’ny valanaretina nahavoa ny reniny ilay zaza menavava, satria amin’ny alalan’ny pitidrora no hifindran’ny “Covid-19”. Fandidiana rahateo no namoahana azy tao ankibon’ny reniny.
Monina any Antanetibe Anativolo, Anjozorobe ity vehivavy matin’ny valanaretina teo am-piterahana ity. Nisy avy hatrany, omaly, ny fidinana ifotony nataon’ny ekipa manokana tany amin’ io toerana io mba hanadihadiana an’ireo rehetra nifanerasera tamin-dRatokompokovavy, fony fahavelony. Harahina fitiliana izany, ankoatra ny fitiliana tamin’ireo mpiasan’ny toeram-pitsaboana nandraisana an’ilay vehivavy.
Fanamafisana ny hery fiarovana :: Azo iverenana sotroina ny tambavy CVO